The vasingadiwi - Part 19 | Apg29
The vasingadiwi - Part 19
Muchikamu ichi ndikuudze zvikuru mwoyo chiitiko, chii chakaitika kuna Michael sezvo ini apinda vakarwisana chikamu.
Michael aiva mudzidzi zvinoshamisa pachikoro. Handina kumboziva naye. Handizivi yaakabva kana ani chaizvo waiva, kupfuura izvi, ndinonzwisisa kuti vadzidzisi akasarangarira kuva sviba uye chakaoma mudzidzi.
Mushure kirasi yangu mudzidzisi scolding naye, saka akaenda neni chaizvoizvo achizvidzivirira. Imwe nguva pashure chiitiko ichi, yakanga mumwe mudzidzi akanga kutyisidzirwa neni. Ipapo akatora neni achizvidzivirira uye akasunda munhu uyu nemabvi ake agere pachigaro chokutonga pamwe nevamwe vashoma vari mukoridho kunze mukirasi panguva yokumbozorora. Zvakange hazvina kudaro zvakanaka zvaitwa, asi ndimire vakashamiswa parutivi uye akarurama arinde. Handina kuziva zvokutaura pamusoro izvi. Ndinorangarira kuti akati chausingafaniri seka Chris, asi iwe unofanira kuva nomutsa kwaari, uye iye akaisa mabvi ake maviri musana wake chete akasundudzira naye pasi pabhenji wake uremu.
Michael Zvichida akanga mwoyo nomutsa chaizvo munhu uye aiva nomwoyo wakanaka asi Rowdy chaizvo uye sviba. Akaenda bhazi chikoro chete sezvo ini. Akabuda ari munhu thousand yapfuura pane pandakagarisa papurazi mu Skeen kuenda mbiri maira Ljungby pariri.
Mumwe masikati kana takaenda kumba huru SJ bhazi rakanga Michael uye shamwari yake sviba chaizvo. Ivo romped, vachidanidzira uye yakazara uye vakamhanya neshure uye akasiya mugero pamusoro mukana ari mubhazi, ukuwo vamwe vadzidzi vose vagere chinyararire vari pazvigaro zvavo, uye wakatsunga kutaura chinhu. Saka vaviri vechiduku vakanga vatora pamusoro bhazi ari kudavira kuti 'akatora bhazi "uye kuita sezvavaifarira. The yose maviri maira ndakaenda kuna bhazi ndisati ndakawana vari chichiita yangu, vakaramba apo bhazi mutyairi wacho murefu zvikuru nokuda miniti ichibuda uye nokukurumidza yakanga asvika pakunogumira.
Zuva rakatevera, Michael akandiudza chivimbo kwandiri, sezvo isu pachigaro chete pabhenji, akanga vakamanikidza nomukomana, chii zvaitika mubhazi pashure ndakawana kure. Mutyairi webhazi murefu dzakadzingwa bhazi rakanga pakupedzisira kutsamwa zvokuti akazunza mukutsamwa uye kukandwa naMikaeri uye shamwari yake kumwe mumugwagwa vasati vasvika chemabhazi yavo.
Ndakati chinhu nezvazvo, asi sezvineiwo ndaiziva kuti bhazi mutyairi akanga asina sarudzo, asi kuita izvo zvaakaita. Unofanira kuziva kuti panguva iyoyo ndakanga ndisina pfungwa. Handina Boo kana baa, I chete akateerera uye vakaedza kutora zvinhu nepose pandaigona. Ndakanga ndisina chinhu muongorori, handina kuziva chii zvaizova asi zvakanga chero nzira kuti ndakanga ndakamira pakachengeteka ichimirira uye akarurama vakatarisa. Handina chikuru hunhu mutambo wacho, asi chete wakanyarara mufashoni uye vainyara uye vasina kuchengeteka shoma mucherechedzi, vasina akatadza kuvhiringidza.
Chii chaizvo chakaitika chinotevera chete marefu skranglige stökige mukomana uyo kutyisidzirwa ini uye akanga achinditi nomudzidzisi wangu, handizivi kana totaura mashoko. Asi chii chakaitika chakanga zvaisiririsa uye utsinye. It ungazoshamisa chikoro chose uye vadzidzi kuti ungonzwa uye mapepanhau kuti kunyora nezvazvo. Kunyanya, ndinoziva kuti waunodzidza naye yangu akati aiva mudumbu kurwadza pazvaiitika.
Michael uye shamwari yake inonzi Patrick akanga ari kunze achifamba mumwe manheru mumusha kwavaigara. Vanotarisana zviviri kana zvitatu vamwe vanhu vaduku vari kunze kuti yenhamo manheru. Mumwe wavo aiva cheni naye sezvaakanga kwokutanga manheru akanga chakabiwa kubva bhizimisi. Yaiva cheni kuti akavhara mari pakupera ichocho.
Apo akarwisa Michael muduku izvi uye shamwari yake. Michael akarohwa nechisimba uye noutsinye chuma. shamwari yake Patrick akatiza mutsipa pamusoro musoro. Akapona, asi Mikaeri akarwa ropa kusvikira rufu kubudikidza noutsinye kurova chuma.
musangano yangu Michael akatanga kwete zvakanaka, ipapo paari Ini rova ​​munhu nosebleed, sezvandakareva kwamuri mumazuva okupedzisira. Asi isu vakava shamwari uye akanga vanoremekedzana, hongu, kunyange iye ini akatsigira pamberi vamwe vakati kutyisidzirwa ini. Ndinofunga Michael aiva akanaka mwoyo, pasinei nokuti bhazi mutyairi akanga akatsamwa kuti akazunza sezvaakanga kunze Michael uye shamwari yake.
Chaizvoizvo Ndine shamwari iyi noutsinye nenzira pfupi nguva isati, kubviswa munyika.
akanga The chikoro mureza vachisimudza hafu-rechikepe.
migove All saka kure mune vasingadiwi
Vecka 25, torsdag 20 juni 2019 kl. 01:07